Iibso L - (+) - Ergothioneine (EGT) budada (497-30-3) Soosaarayaasha
L - (+) - Ergothioneine (EGT) waa biosynthesized biolisnthesized chiral amino-acid antioxidant biosynthesized oo ku jirta bakteeriyada qaarkood iyo fangaska. Waa xarun muhiim u ah bioactive oo loo adeegsaday 'scavenger radical', filter filter ultraviolet, a habeynta ficil-celinta sunta dab-ku-qaadista iyo unugyada unugyada jirka, iyo cilmiga jir-dhiska, iwm.
L - (+) - Xogta Saldhigga Ergothioneine
magaca L-(+)-Ergothioneine (EGT)
Magaca kiimikada (α-S) -α-Carboxy-2,3-dihydro-N, N, N-trimethyl-2-thioxo-1H-imidazole-4-ethanaminium cusbo gudaha
Isku mid ahaanshaha Ergothionine; L - (+) - Ergothioneine; Erythrothioneine
Formula kelli C9H15N3O2S
Miisaanka kelli 229.30
Dhibicda Biyaha 255-259 ° C
Muhiimadda InChI SSISHJJTAXXQAX-ZETCQYMHSA-N
Imaanshaha caddaan adag
Nolosha badh wareegsan 30 maalmood
milmi Dhibaato biyo ah (50 mg / ml), acetone, ethanol kulul, iyo methanol.
kaydinta Xaaladda -20 ° C (des.)
Codsiga Daawada antioxidant-ka iyo tan xagjirka ah ee xagjirka ah
L - (+) - Ergothioneine (EGT) General Description
L-Ergothioneine waa antioxidant xasilloon oo laga heli karo xaaladaha murugada badan ee tamarta sunta ee dhirta iyo unugyada xayawaanka. L-ergothioneine waxay leedahay awood ay ku cabudhiso xagjirnimada xorta ah waxayna ka ilaalisaa unugyada UV-ka ay ROS la shaqeyso oo ka tayo sareysa ka hortagga antioxidants coenzyme Q (10) ama idebenone, sidaa darteed waxay ka dhigeysaa antioxidant wax ku ool ah. Xarunta waxaa lagu muujiyey inuu yahay sunta loo yaqaan 'siol thiol buffering antioxidant', waxay kor u qaadeysaa suurtagalnimada unugyada ee ay kiciso hydrogen peroxide (H2O2), iyo waxay horjoogsataa oksidaynta DNA-ga ee peroxynitrite (ONOO-) ee qadka unugyada neerfaha ee neerfaanta unugyada (N-18-RE- 105).
L-(+)-Ergothioneine (EGT) (497-30-3) Taariikhda
EGT waxaa lagu sameeyaa nooleyaal aad u yar, gaar ahaan Actinobacteria, Cyanobacteria, iyo fangaska qaarkood. Ergothioneine waxaa la helay 1909 waxaana loogu magac daray fungus ergot oo markii ugu horeysay laga nadiifiyey, iyadoo qaabkeeda la go'aamiyay 1911.
L - (+) - Ergothioneine (EGT) Farsamooyinka Ficil
l - (+) Ergothioneine waa dabiici dabiici ah oo ku dhaca thiol amino acid oo leh astaamo antioxidant iyo faa'iidooyin u leh kaabis cunto. In kasta oo aqoonsigeedii qarniga ahaa iyo baahinta ballaaran ee cuntada aadanaha, wax yar baa laga ogyahay qaabkeeda waxqabad iyo nabadgelyo.
L - (+) - Codsiga budada ee Ergothioneine (EGT)
L - (+) - Ergothioneine ayaa la isticmaalay:
iyada oo ah qayb ka mid ah dhexdhexaadyada koriinka ee dhismayaasha cumulus-oocyte (COCs) si ay u tijaabiso shaqada ilaalinta ee qaab dhismeedka liinta peroxide
sida xarun ka hortag ah antioxidant si loo baaro bukaannada nooca 2 ee sonkorowga
L-Ergothioneine-nooc cusub antioxidant dabiici ah
EGT waa biosynthesized biolisnthesized dabiiciga ah "chiino amino-acid antioxidant" ku ah bakteeriyada qaarkood iyo fungi. Waa xarun muhiim u ah bioactive oo loo adeegsaday 'scavenger radical', filter filter ultraviolet, a habeynta ficil-celinta sunta dab-ku-qaadista iyo unugyada unugyada jirka, iyo cilmiga jir-dhiska, iwm.
Faa'iidooyinka hawlo badan, EGT waxay ka dhex muuqataa antioxidants kale oo badan.
——EGT way fududahay in lagu uruursado unugyada isku uruursanaanta way ka xasilloon tahay sunta kale ee lidka-sunta.
——GGT inta badan waxay ku kicineysaa ROS inay ka hortagto oksidho, halka glutathione iyo kuwa kale ay ka hortagaan xagjirnimada xorta ah, taasi waa, waxyaabo kale oo ka hortaga sunta aashitada.
sida kontoroolka togan ee borotokoolka side 22 A4 (SLC22A4) qaabeynta safarka
L - (+) - Ergothioneine waxay ku habboon tahay in loo isticmaalo daraasadda falcelinteeda iyada oo ay la socoto 2,2′- iyo 4,4′-dipyridyl disulphide (2-Py-SS-2-Py iyo 4-Py-SS-4- Py), loogu talagalay soo-saarista unugyada tijaabada ah inta lagu gudajiro tijaabooyinka waxqabadka ku jira fitamiinada ee ATM (Ataxia telangiectasia mutated) ama ATR (ATM- iyo RAD3-la xiriira).
L - (+) - Ergothioneine (EGT) Baadhis dheeraad ah
Natiijooyinka: EGT waxay ahayd lafdhabarta ugu firfircoon ee xagjirnimada lacag la'aanta ah marka la barbar dhigo antioxidant-ka caadiga ah sida GSH, uric acid iyo trolox. Gaar ahaan, awoodda ugu sarreysa antioxidant-ka ee ay soo bandhigtay EGT iyo kuwa xag-jirka peroxyl waxay dhalisay 25% inay ka sarreeyaan qiimaha laga helay tixraaca antioxidant trolox. Awoodda cabudhinta EGT ee xagjirnimada hydroxyl waxay sare u kacday 60%, marka la barbar dhigo uric acid, oo mataleysa tixraaca antioxidant-ka iyo xag-jiriinta hydroxyl. Ugu dambeyntii, EGT wuxuu muujiyey waxqabadka antioxidant-ka ugu sarreeya sidoo kale dhinaca peroxynitrite, oo leh culeys awood 10% ka sarreeya midka uric acid.
EGT waxa kale oo ay saamayn ku leedahay nidaaminta tamarta gudaha,
5-10mg unug oo loogu talagalay dadka waaweyn iyo 2-3 halbeeg oo joogto ah qaadashada ayaa muhiim u ah cuntadaada maalinlaha ah.
Xigasho: Li Yiqun, Zhou Nianbo. Waxqabadka Biology iyo Codsiyada EGT [J]. Injineernimada cuntada ， 2010，9 （3） ： 26-28.
Akes Qaababka waxaa loo taxay sida soo socota:
Caruurta (3-11 sano)
0l XNUMX mg / maalin
Dhallinyar (11-21 sano）
≤30 mg / maalin
Dadka waaweyn (21-80 sano)
Qiyaasta qaadashada carruurta iyo dadka waaweyn （3 -80 sano jir）
U adeegsiga haweenka uurka leh ama kuwa nuujinaya lama talinayo.
Isha xogta: Tetrahedron markii aad dalbanayso USI NDI
■ Xogta ayaa soo jeedineysa: 10.5mg / g oo loogu talagalay OXIS's ADI (Qaddarka Maalinlaha ah ee La Aqbali Karo).
L - (+) - Ergothioneine (EGT) tixraaca budada
Akanmu D, Cecchini R, Aruoma OI, Halliwell B (Julaay 1991). "Waxqabadka antioxidant ee ergothioneine". Arch Biochem Biophys. 288 (1): 10–
"Ergothioneine". PubChem, Xarunta Qaranka ee Macluumaadka Biotechnology, Maktabadda Qaranka ee Caafimaadka ee Mareykanka. 2 Nofeembar 2019. La soo celiyey 7 Nofeembar 2019.